OS X मा माउस कसरी नाम बदल्ने म म्याकबाट हुँ
यदि तपाइँ विन्डोजबाट म्याकमा स्विच गर्न र एप्पल अनलाइन स्टोर वा एक एप्पल स्टोर भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाई अवश्य हुनुहुनेछ जब तपाईले मूल्यहरु देख्नु हुन्छ यसको बारेमा सोच्नुहोस् एक पटक भन्दा बढी। र दुई हामी विन्डोज मार्फत मार्केटमा फेला पार्न सक्ने मोडलहरूको तुलनामा म्याक कम्प्युटरहरू धेरै महँगो हुन्छन्। तर यदि तपाईं निर्धारित हुनुहुन्छ भने, तपाईं दोस्रो-हात म्याक खरीद गर्न रुचि राख्न सक्नुहुन्छ।
कुनै पनि विन्डोज पीसी भन्दा म्याक कम्प्युटरहरूको लामो आयु हुन्छ। अगाडि बढ्दै बिना। म हाल El Capitan संग २०१० म्याक मिनी प्रयोग गर्छु। मेरो म्याक मिनीले पाएको एक मात्र अपडेट एसएसडीको लागि हार्ड ड्राइभ स्वप हो। यो नयाँ ठोस हार्ड ड्राइवको साथ, mi नयाँ म्याक मिनीले तीन वा चार बर्ष सम्म सिद्ध काम गर्न जारी राख्नेछ प्रदर्शन मुद्दा बिना अधिक।
यदि तपाईं दोस्रो-हात म्याक किन्नुहुन्छ, जसमा माउस र कुञ्जीपाटी समावेश छ, सम्भवतः पछिल्लो मालिक कति अजीब थियो यसमा निर्भर गर्दछ, माउसले यसको अघिल्लो मालिकको नाम बचत गर्न सक्छ। यद्यपि यो सत्य हो कि यसले कुनै पनि चिन्ता गर्दैन, यसले जेनेरिक नाम वा हाम्रो नाममा परिवर्तन गर्न चोट पुर्‍याउँदैन।
ओएस एक्स माउसको नाम बदल्नुहोस्
यसका लागि हामी जान्छौं प्रणाली प्राथमिकताहरू.
प्रणाली प्राथमिकता भित्रबाट, हामी ड्राइभ गर्छौं ब्लुटुथ ताकि सबै उपकरणहरू हाम्रो म्याकमा जडित छन् देखाइएको छ।
जब हामीले माउस फेला पार्दछौं हामी यसमा खडा हुन्छौं र दायाँ बटनको साथ क्लिक गर्नुहोस् ड्रप-डाउन मेनू प्रदर्शन गर्न।
मेनूमा हामी नाम बदल्नुहोस् र हामी नाम मा परिचय दिन्छौं जुन हामी अब देखि हाम्रो माउस सहन चाहान्छौं।
मैले पहिले टिप्पणी गरेझैं म्याक उपकरणहरूको लामो समय पछि लामो भयो अपरेटिंग प्रणाली केवल कपर्टिनो-आधारित कम्पनीले निर्मित कम्प्युटरहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » ओएस एक्स मा माउस कसरी नाम बदल्ने
PDFElement, PDF फाईलहरू परिवर्तन भएका छन्